के हो साइलेन्ट हार्ट अट्याक ? पाँच संकेत र पाँच बच्‍ने उपाय — OnlineDabali
के हो साइलेन्ट हार्ट अट्याक ? पाँच संकेत र पाँच बच्‍ने उपाय
Posted on October 8, 2017 by अनलाइन डबली
मानिसहरुको फेरिएको जीवनशैली र दैनिक क्रियाकलापले स्वास्थ्य समस्या पनि जन्माइरहेको हुन्छ । पछिल्लो समयमा हर्ट अट्‍याकको समस्या बढिहरेको छ । त्यसमा पनि साइलेन्ट हर्ट अट्याकले त मानिसले उपचार समेत पाउँन सक्दैनन् ।
को हो हर्ट अट्‍याक ?
किन थाहा हुँदैन साइलेन्ट हर्ट अट्याकको दुखाई ?
५-नियमित रूपमा मेडिकल जाँच गराउनुहोस्
गौचन हत्याको जिम्मा युवा संघका पूर्वकोषाध्यक्ष मनोजले लिए, को हुन् मनोज ?
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष गौचनको प्राडो गाडीभित्रै हत्या
जुठापौवा स्वास्थ्य चौकीलाई एम्बुलेन्स